Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 9)
Ireo no fampiharana sy lalao tsara indrindra amin'ny taona, hoy ny Google
Google dia namorona ny filaharana ny lalao sy fampiharana tsara indrindra amin'ny taona 2018, lalao ary fampiharana izay asehonay anao eto ambany.
Fampiharana firaisan-kina Android hanampiana ireo sahirana
Jereo ity safidin'ireo rindranasa firaisankina ho an'ny Android ity izay ahafahanao manampy mora foana an'ireo tena mila izany.
Ireo mpampiasa Google Hangouts dia hivadika ho Hangouts Chat and Meet
Fantaro izay rindranasa hisolo ny Google Hangouts rehefa tsy zahana amin'ny fomba ofisialy intsony ilay rindranasa.
Ahoana ny fomba fandraisam-peo amin'ny Skype raha tsy misy fampiharana fahatelo
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika mandray an-tsoratra antso na antso an-tsary ao amin'ny app Skype raha tsy mila fampiharana hafa.
Ahoana ny fomba hamafana ireo fampiharana ao amin'ny fanangonana Google Play anao
Jereo ny fomba tsotra ahafahanao mamafa ny lalao na ny rindranasa ao amin'ny fanangonana fampidinana Google Play ao amin'ilay rindrambaiko.
Firy ny rindranasa anananao na efa anananao amin'ny Android anao? Eto ianao dia afaka mahafantatra
Jereo ireo dingana ahafahanao mahafantatra mora ny isan'ny rindranasa anananao na efa nanananao tamin'ny telefaona Android anao.
Google Hangouts dia efa afaka nanana daty fanaovam-beloma
Fantaro misimisy kokoa ny momba ny faran'ny fampiharana fandefasan-kafatra Google Hangouts izay azo esorina amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2020.
Pokémon GO: tena akaiky ny ady eo amin'ny mpampiofana
Ora vitsy lasa izay dia nilaza taminay ny momba ny Andron'ny fiarahamonina ao Pokémon GO izahay, hetsika izay haharitra hatramin'ny ...
Fihetsiketsehana amin'ny fitetezana mandroso sy miverina mankany Chrome ho an'ny Android tsy ho ela
Hisy fihetsika fitetezana roa fotsiny ao amin'ny Chrome: mandroso sy miverina. Amin'izany no hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa.
[Nohavaozina tamin'ny fampianarana video] Ahoana ny fomba hamoronana ny fanaonao voalohany ao amin'ny Google Assistant
Google Assistant dia mpanampy amin'ny feo izay mamela antsika hanao asa isan-karazany noho ny mahazatra. Lazao hoe "Antoko" dia zahao izay hataony.
Ahoana ny fomba fampidinana amin'ny fomba ofisialy WhatsApp ho an'ny takelaka
Rehefa niandry ela dia afaka maka sy mametraka WhatsApp ho an'ny takelaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny fivarotana fampiharana Google izahay.
Ny tantara Instagram dia afaka mitokana ankehitriny
Omaly dia nilaza taminay ny momba ny fanavaozana farany ny serivisy atiny streaming malaza izay mamela anay hanao Tantara ...
Fomba fampiasana ny mpandika teny Gboard miaraka
Jereo ny fomba handikana ny lahatsoratra mandeha ho azy noho ny Gboard amin'ny fampiharana rehetra amin'ny findainay Android.
Misy ny tantara YouTube any Espana izao
Vao nidina tany Espana ny Tantara YouTube mba hahafahan'ireo mpampiasa manana mpanaraka betsaka indrindra mamorona horonantsary vonjimaika amin'ny andavanandrom-piainany.
Andramo alohan'ny olon-kafa ny rafitry ny hafatra marobe amin'ny WhatsApp
WhatsApp dia nohavaozina miaraka amina fampiasa vaovao ho an'ny hafatra marobe ary ireo mpampiasa ny kinova beta ihany no afaka manandrana.
Kaizala, rindrambaiko fifandraisana matihanina an'ny Microsoft izay manaraka ny aorian'ny Slack
Kaizala dia rindrambaiko fifandraisana matihanina vaovao izay ampy hiteraka dinamika lehibe amin'ny orinasa.
Ny fanavaozana manaraka ny Android Auto dia hahafahantsika mijery topy maso an'ireo hafatra
Ny fanavaozana manaraka ny Android Auto dia hampiseho topy maso ny hafatra voarainay miaraka amin'ny fanavaozana ny mpilalao mozika.
Farany Google Maps manavao ny menio fitetezana ny lafiny
Ny menio fitetezana no ifantohan'ny fanavaozana Google Maps vaovao. Amin'ity indray mitoraka ity dia diovina ary mazava kokoa ny zava-drehetra.
Ahoana ny fomba hanavotana ireo kaody fampiharana na karatra fanomezana amin'ny Play Store
Raha manana kaody fangatahana misintona maimaimpoana na te hampiasa karatra fanomezana Google Play ianao dia ity no fomba hanaovana azy.
Ahoana ny fomba hampiasana ny sivana spam amin'ny app Google phone
Jereo ny dingana tokony harahintsika raha te hampandeha ny sivana spam ao amin'ny app Google phone isika ary hanadino izany antso spam izany.
Ahoana ny fomba hamafana ny kaontinao WhatsApp
Jereo ireo dingana arahinao mba hahafahanao mamafa ny kaontinao WhatsApp maharitra avy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra mihitsy.
Banky telo vaovao no ampiana amin'ny lisitry ny mifanaraka amin'ny Google Pay
Jereo ireo banky vaovao nanatevin-daharana ny lisitry ny banky mifanaraka amin'ny Google Pay any Espana izay manampy ny fampiharana hampandroso.
Ahoana ny fanavaozana ny fampiharana Play Store amin'ny kinova farany misy
Jereo ny dingana tsy maintsy arahinay mba hanavaozana ny Play Store amin'ny kinova farany misy.
Fomba fampiasana mozika Spotify amin'ny famantaranandro fanairana amin'ny app famantaranandro Google
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika mampiasa hira Spotify ho famantaranandro fanairana amin'ny fanairana ny fampiharana famantaranandro Google amin'ny Android.
Google manatsara ny fiasan'ny Fast Pair
Google dia manomana fanavaozana vaovao ho an'ny Fast Pair, ny rafitra fampiarahany fitaovana Bluetooth hampifanaraka azy amin'ny Smart Lock.
Hashtags dia azo ampiasaina amin'ny tsikera ao amin'ny Google Maps
Raha zatra mampiasa hashgats amin'ny tambajotra sosialy ianao dia azonao ampiasaina amin'ny Google Maps mandritra ny andro vitsivitsy.
Toy ny, ny tena fanoloana ny Tik Tok
Ahoana ny fomba hijerena Internet haingana sy azo antoka amin'ny findainao Android
Raha hijerena haingana kokoa sy azo antoka kokoa dia manana 1.1.1.1 ianao, fampiharana izay manamboatra VPN ho azy mba hahafahanao mifandray amin'ny DNS haingana sy azo antoka kokoa.
Ampifanaraho amin'ny Krismasy ny Android anao: Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny ringtone Noely maimaim-poana
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahanao manakana ny fanehoan-kevitra avy amin'ny mpampiasa hafa amin'ny Instagram mba tsy hisy hahita ny hevitrao.
Tadiavo ireo dingana arahinao mba hahazoana faktiora ho an'ny fividiananao ao amin'ny Google Play ary hahafahanao manamarina ny fandanianao amin'ny fomba tsotra.
Ny varotra Black Friday koa dia nahatratra ny Google Play Store ary misy hatramin'ny Cyber ​​Monday
Tonga tao amin'ny Play Store ihany koa ny Zoma Mainty, izay misy fihenam-bidy betsaka sy kilalao malaza indrindra amin'izao fotoana izao.
Ahoana ny fomba hamoronana sticker anao manokana amin'ny WhatsApp miaraka amin'ny Sticker Studio
Sticker Studio dia rindrambaiko iray ahafahanao mamorona sticker amin'ny WhatsApp amin'ny fomba mora sy tsotra. Mila fanatsarana, fa tena tsara.
Ahoana ny fomba hitantanana ny famandrihana aloanao ao amin'ny Google Play
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba hitantanana mora ny famandrihana karamao ao amin'ny Google Play amin'ny fampiharana Android.
Microsoft Launcher dia hanampy ny endri-javatra iOS 12 Airtime amin'ny fanavaozana manaraka
Raha liana amin'ny asa ampiasain'ny iOS 12 ianao ary tianao ny mankafy azy amin'ny Android, mila miandry fotsiny ny fanavaozana manaraka ny Microsoft Launcher ho an'ny Android ianao.
Ahoana ny fomba fanoratana haingana amin'ny findainao Android amin'ny Typing Hero
Miaraka amin'ny Heroing typing dia afaka manoratra toy ny demony haingana ianao raha mamorona fanafohezana ilaina hamoronana ireo andianteny ampiasainao isan'andro.
Ny fampiharana tsara indrindra ampiasaina amin'ny Android Auto
Jereo ity safidin'ireo fampiharana azontsika ampiasaina amin'ny Android Auto ity mba hialana bebe kokoa amin'ity rafitra fiasa ity.
Ahoana ny fomba hamafana ireo hafatra alefa amin'ny Facebook Messenger
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika mamafa ireo hafatra izay nalefanay tao amin'ny Facebook Messenger noho ny fiasa vaovao.
Ny Meizu 16S dia havoaka miaraka amina adaptatera misy puce mozika misaraka ao anatiny
Meizu CEO Jack Wong dia nanambara fa ny Meizu 16S dia havoaka miaraka amina adaptatera puce music. Jereo!
Sony dia nandefa ny PlayJ, sehatra vaovao hizarana ny lalaoo amin'ny sakaiza tokan-tena iray izay afaka hijoro ho vavolombelona amin'izy ireo amin'ny fihomehezana amin'ny fakantsary.
Fantaro misimisy kokoa momba ny kinova vaovao amin'ny Find My Device, izay miasa ihany koa amin'ny sarintany anaty trano amin'ny tranobe.
Fantaro bebe kokoa momba ity fampiroboroboana Amazon Music Unlimited ity ary tadiavo ireo serivisy hafa toa ny Prime Video sy Kindle Unlimited amin'ny Internet.
Ahoana no hahalalanao ny fotoana laninao amin'ny Instagram miaraka amin'ny fiasa vaovao an'ny fampiharana
Jereo ny fotoana laninao amin'ny Instagram isan'andro noho ny fiasa vaovao izay efa tonga amin'ny fampiharana Android. Nanazava tsikelikely.
Finday Android vaovao? Ka mila an'ireto fampiharana ireto ianao
Fantaro misimisy kokoa momba ireo fampiharana ilaina amin'ny telefaona Android anao ireo, mety raha vao nahalala vaovao ny findainao. Miaraka amin'ny rohy fampidinana.
Ahoana ny fomba hanampiana baram-by misy hitsin-dàlana amin'ny zava-drehetra amin'ny Android miaraka amin'ny Floating Tool Bar
Alefaso izay hanazavana ny fomba famoronana hitsin-dàlana amin'ny zavatra rehetra amin'ny Android amin'ny alàlan'ny biraovana misy Floating Tool Bar.
Fetsy hahazoana bebe kokoa amin'ny Facebook Messenger
Fantaro ireo fikafika ireo hahafahanao mahazo bebe kokoa amin'ny Facebook Messenger. Fetsy tsotra ho an'ny fampiharana Android.
Amin'ity fampiharana ity dia azonao atao ny mifehy ny fampandrenesanao amin'ny terminal Android anao rehetra, na dia mamaly WhatsApp avy amin'ny fitaovana hafa aza !!
Ahoana ny fomba famoronana fanairana matsilo miaraka amin'ny Google Assistant
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika mamorona fanairana marani-tsaina amin'ny alàlan'ny Google Assistant amin'ny alàlan'ny finday Android amin'ny fomba tsotra.
Ahoana ny fanovana ny kaontinao Instagram amin'ny kaonty orinasa
Jereo ireo dingana tokony harahinao hanovana ny kaontinao ao amin'ilay fampiharana ho kaonty orinasa amin'ny fomba tsotra.
Atsipazo miaraka amin'i Harmony ireo fahasosoranao isan'andro, ankamantatra an-tsoratra mozika
Raha mitady lalao Zen hiala sasatra miaraka isan'andro ianao dia Harmony ity. Puzzles mozika miaraka amina fomba kanto hita maso.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fampiharana na ny lalao tsy hahalala ny toerana misy anay
Ny fanafoanana ny fidirana amin'ny toerana misy an'ireo rindranasa izay napetraka tao amin'ny solosainay dia dingana tsotra izay asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny fanovana ny lokon'ny chat ao amin'ny Facebook Messenger
Jereo ny dingana tokony harahintsika mba hahafahantsika manova ny loko aseho amin'ny resaka amin'ny Facebook Messenger.
Ahoana ny fanovana ny fahazoan-dàlan'ny fampiharana amin'ny Android
Raha reraky ny tsy fahalalana izay rindranasa mahazo data avy amin'ny finday finday avo lenta ianao, eto ambany izahay dia hampiseho aminao ny fomba hahalala sy hanovana azy ireo.
Fantaro ireo fikafika ireo hahafahanao mivoaka bebe kokoa amin'ny YouTube amin'ny alàlan'ny finday Android amin'ny fomba tsotra ary manana fahafaha-manao bebe kokoa.
Ahoana ny fanesorana ny isa amin'ny lalao amin'ny lalao Google Play
Jereo hoe ahoana no ahafahanao mamafa mora foana ny fandrosoanao amin'ny lalao Google Play Games amin'ny findainao Android.
Minecraft ho an'ny Android dia ahafahantsika mizaha maimaimpoana ny lalao
Ny kinova Mincecraft maimaim-poana sy fitsapana dia azo alaina ao amin'ny Google Play Store ankehitriny, lalao iray azontsika andramana maimaim-poana alohan'ny hanandramana azy.
Ahoana ny fomba hampiasana ny lohahevitra maizina an'ny Evernote: ny vaovao lehibe amin'ny app naoty
Asehonay aminao ny fomba hampiasana ny lohahevitra maizina an'ny Evernote izay mahavita manolotra traikefa mahaliana iray hafa noho ny lohahevitra banga.
Fantaro bebe kokoa ny momba ny famafana famafana hafatra vaovao izay tonga ao amin'ny Facebook Messenger ary hampiasaina amin'ny Android atsy ho atsy.
Jereo ny dingana tsy maintsy arahinay mba hamerenana na hamerenana ny kaontinay Instagram raha misy ny fanapahana na fanaovana tahaka.
Ahoana ny fomba hiresahana samirery amin'ny Facebook Messenger
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahanao miresaka amin'ny olon-tsotra miaraka amina encryption farany eo amin'ny Facebook Messenger.
Ny fomba fiasan'ny maody alina tsy mampino "Night Sight" an'ny Google Pixel
Ny majika amin'ny modely Alina amin'ny Sight Pixel dia hita ao amin'ny algorithms sy rindrambaiko novolavolain'i Google lehibe.
[APK] Sintomy izao ny beta 0.9.5 an'ny PUBG Mobile izay manomboka ny vanim-potoana vaovao
Efa antomotra ny vanim-potoana vaovao ary manomana anao ny Tencent Games hankafizanao azy amin'ny beta 0.9.5 vaovao azonao.
Ahoana ny fanovana hafatra amin'ny Telegram hampamirapiratra azy ireo
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahantsika manao hafatra amin'ny Telegram mangarahara, amin'ny dingana tsotra marobe ao amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hanakanana olona amin'ny Instagram
Fantaro misimisy kokoa ny fomba ahafahantsika manakana ireo mpampiasa hafa mora foana amin'ny Instagram amin'ny dingana vitsivitsy.
Ahoana ny fomba hifehezana ny Android anao amin'ny fihetsika amin'ireo fampiharana 2 ireo amin'ny fomba mahavariana
Fampiharana 2 antsoina hoe Fingerprint Swipe sy Edge Gesture izay mamela anao hifehy ny Android amin'ny fihetsika amin'ny fomba izay tsy noeritreretinao akory.
Netflix bombshell: fitsapana amin'ny taha mora dia mora amin'ny finday ihany
Ny tahan'ny Netflix vaovao dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny smartphone amin'ny vidiny mihena mihoatra ny iray: ny antsasaky ny vidiny mora indrindra ihany izao.
Fantaro ny fomba hidirana amin'ny lalao eo noho eo amin'ny alàlan'ny fampiasana Play Games amin'ny findainao Android ary amin'izany dia alao ireo lalao ireo.
Ahoana ny fomba hampiasana maody iray amin'ny Android amin'ny Reursability Cursor
Miaraka amin'ny fampiharana antsoina hoe Reachability Cursor dia afaka manana maody iray amin'ny finday Android ianao nefa tsy mila miandry fanavaozana Android.
Ahoana ny fomba hampiasana ny lohahevitra maizina ao amin'ny app Contacks
Tao anatin'ny roa taona lasa, hitantsika ny fomba nahatonga ny efijery finday smartphone lasa ampahany iray hafa ...
Fandefasana Apollo tsotra izao. Maimaimpoana, tsy misy doka ary tsara ho an'ny Android
Fitaovana hahazoana tombony betsaka amin'ny Google Maps
Jereo ny asa tsara indrindra ananantsika ao amin'ny Google Maps, izay ahafahanao mahazo tombony betsaka amin'ny fampiharana fitetezana.
Ireto ny lalao sy ny fangatahana voatondro ao amin'ny Google Play Best of Awards 2018
Jereo ny lalao 20 sy ny rindranasa 20 natolotry ny loka Google Play Best of 2018 izay azo alaina ho mpandresy.
Fampiharana tsotra an'ny apps an'ny fifandraisana, fakana an-tsoratra, fizahana rakitra, sary ary sary
Andianà fampiharana open source 5 avy amin'ny Simple izay ahafahanao mandray naoty, manao sary, mizaha ireo rakitra, mitantana ny fifandraisanao na mijery ny sary nalaina.
Amazon Alexa Vs Google Assistant, adin'ny mpanampy amin'ny Android
Ahoana ny fomba hanajanonana ny fidirana mandeha ho azy ao amin'ny Google Chrome
Jereo ny dingana hanafoanana ny fidirana an-tsokosoko ao amin'ny Google Chrome amin'ny telefaona Android anao. Fampandehanana miasa amin'ny alàlan'ny default.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fanamarinana ny fividianana ao amin'ny Google Play
Jereo ny dingana tokony harahina hanetsehana ny fanamarinana ny fividianana ao amin'ny Google Play mba tsy hividianana rindranasa raha tsy mahazo alalana aminao.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fanavaozana ny Play Store tsy handany data angovo
Raha reraky ny fahitana ny fandehan'ny angon-drakitrao dia tokony hanomboka amin'ny fanitsiana izay serivisy Android mahazo izany ianao.
Hofafan'ny WhatsApp ve ireo hafatrao amin'ny 12 Novambra?
Fantaro bebe kokoa momba ny fomba hisorohana ny WhatsApp tsy hamafa ireo backups anao ao amin'ny Google Drive.
Ny sticker sticker maimaim-poana ho an'ny WhatsApp
Ankehitriny ianao dia afaka manana ny sticker farany tsara indrindra ho an'ny WhatsApp miaraka amin'ny zava-baovao navoakan'ny fahatongavan'ity fampiasa lehibe ity.
Izany no fiasan'ny mpanampy Amazon Alexa amin'ny Android-ko
Ahoana ny fomba hahitanao ireo naoty am-peo amin'ny WhatsApp
Jereo ny fomba samihafa hamerenana ireo naoty an-tsoratra izay voafafanay tamin'ny alàlan'ny WhatsApp tamin'ny Android.
Manova ny anarany ho Files avy amin'i Google ny Files Go
Ny mpitantana ny rakitra Google Files Go dia nanova ny anarany ary antsoina hoe Google Files ankehitriny.
SEGA Heroes dia lalao vita amin'ny rangotra avy amin'ilay orinasa malaza. Ao amin'ny Candy Crush Saga no misy ity lalao vaovao ity miaraka amina fikasana maro.
Ahoana no hanafenana ny tantaranao Instagram amin'ny olona sasany
Jereo hoe ahoana no ahafahanao manafina ny tantaranao Instagram mba tsy ho hitan'ny mpanaraka anao sasany.
Hanavao ny fampiharana Android rehefa mampiasa azy ireo ianao
Jereo ny API vaovao ho an'ny rindranasa Android izay ahafahanao manavao azy ireo mandritra ny fampiasanao azy ireo ary hampiseho ireo fanamarihana fanavaozana.
Bixby amin'ny teny espaniola dia zava-misy ankehitriny
Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao avy amin'i Bixby, mpanampy an'i Samsung, izay efa miteny espaniola amin'ny fomba ofisialy, ary koa ireo fiteny hafa.
Ahoana ny fomba hanafenana ny fampandrenesana manelingelina amin'ny bara misy ny TidyPanel
TinyPanel dia fampiharana ahafahanao manafina fampandrenesana manelingelina anao hanana bara fitadiavana madio kokoa amin'ny findainao.
Caprice, fampiharana radio tsy hay hadinoina tsy miova amin'ny doka
Google dia efa nanandrana nitory ny lozam-pifamoivoizana sy radara tao amin'ny Google Maps
Ny mpampiasa sasany dia efa nahita ny safidy ahafahana mitatitra lozam-pifamoivoizana sy radara ao amin'ny Google Maps: ny endrika vaovao an'ny G.
Ahoana ny fomba hamoronana Stickers for WhatsApp mora foana
Ahoana ny fambolena sary amin'ny endrika boribory amin'ny Android
Lahatsoratra azo ampiharina sy tsotra izay hanazavana ny fomba ahafahanao manapaka sary amin'ny endrika boribory amin'ny Android amin'ny alàlan'ny Circle Cutter.
Ny rindranasa App cloner, rindranasa mamela anay hanao dika mitovy amin'ny terminal Android anay, dia nesorina tao amin'ny Play Store.
Ahoana ny fampiasana ny rahona Telegram. Mitehirizana maimaimpoana maimaimpoana amin'izay tianao tehirizina !!
Fetsy hahazoana bebe kokoa amin'ny Gboard amin'ny Android
Jereo ireo fika ireo mba hialana bebe kokoa amin'ny Gboard amin'ny finday Android ary ampiasao ny klavier amin'ny fomba tsara kokoa.
Fenoy maimaimpoana ny tavoahanginao amin'ny rano amin'ny Tap: fampiharana tena tany am-boalohany hampihenana ny fampiasana plastika
Tap dia te hampihena ny fampiasana isan'andro ny plastika amin'ny tavoahangin-drano amin'ny fanomezana refill maimaim-poana.
YouTube dia manampy ny Mate 20 vaovao ao amin'ny lisitry ny fitaovana atolotra hankafizanao ny YouTube
Ny lisitry ny terminal dia mifanaraka amin'ny YouTube dia nitarina tamin'ny fanampiana ny Mate 20 vaovao avy amin'ny Huawei sy ny Pixel 3 avy amin'i Google
Ahoana ny fomba hamafana ny tantaran'ny toerana Facebook
Jereo ireo dingana hamafana ny tantaran'ny toerana Facebook izay mirakitra ny hetsika rehetra nataontsika. Azo atao amin'ny Android.
Ahoana ny fanovana ny anaran'ny telefaoninao hahafantarana azy ao amin'ny Google Play
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika manova ny anaran'ny telefaoninay ao amin'ny Google Play hahafantarana azy mora foana.
Ireo fampiharana tsara indrindra handrenesana ireo antso ao amin'ny Android
Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay hahafahanao manoratra antso amin'ny Android amin'ny fomba tena tsotra. Afaka daholo izy ireo.
Ahoana ny fametrahana keyboard vaovao amin'ny findainao Android
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika manova ny fitendry ampiasainay amin'ny finday Android, ary koa ny safidy misy.
Ahoana ny fomba fitaterana fampiharana maloto ao amin'ny Google Play
Jereo ny dingana tsy maintsy arahinay mba hitaterana rindranasa na lalao manimba ao amin'ny Google Play amin'ny fomba tsotra.
Ahoana ny fanovana lohahevitra amin'ny Telegram
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika manitsy lohahevitra ao amin'ny fampiharana Telegram amin'ny alàlan'ny finday Android ary manamboatra ny interface misy azy.
Samsung dia hanokatra ny API Bixby
Fantaro bebe kokoa ny antony nanokafan'ny Samsung ny API Bixby ho an'ny mpamorona ho an'ny endri-javatra misimisy kokoa.
Voamarina indray: misy fotoana kely hanehoan-doka amin'ny WhatsApp
Voamarina indray fa haneho doka ny WhatsApp. Fantaro ny antsipiriany rehetra sy izay nolazain'i Chris Daniels momba ity vaovao ratsy ity ho an'ny maro.
Ahoana ny fomba hizarana horonantsary IGTV amin'ny Instagram Stories: inona no vaovao amin'ny tambajotra sosialy
Instagram dia nanisy fampiasa vaovao ao amin'ilay rindrambaiko, ary hizara horonantsary IGTV ao amin'ny Tantara. Manazava ny fomba.
Google Play dia mandà ireo fampiharana izay tsy nohamarinina ho an'ny Android 8.0 Oreo
Ny fampiharana amin'ny Google Play dia tokony hohatsaraina amin'ny Android 8.0 Oreo. Fantaro misimisy kokoa momba ny politika fivarotana fampiharana vaovao ho an'ny fampiharana.
Google Play Best Of 2018 Awards: Ka afaka mifidy ny lalao tianao indrindra ianao
Jereo hoe ahoana no ahafahanao mifidy ny lalao tianao indrindra amin'ny Google Play Best Of 2018 Awards. Fifidianana manomboka ny 12 Novambra.
Ahoana no hanafenana raha mifandray amin'ny Facebook Messenger ianao
Fantaro ny fomba hanafenana ny toerana misy anao amin'ny Internet ao amin'ny Facebook Messenger mba tsy hisy hahita ny toerana misy anao amin'ny Internet.
Ahoana ny fomba hampanginana ny fifandraisana amin'ny Instagram
Hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba amamoahana ny fifandraisana amin'ny Instagram. Noho io fiasa io dia hijanona tsy hahita famoahana avy amin'ny fifandraisana ianao.
Google misafidy ny fampiharana natao tsara indrindra ho an'ny Android amin'ny 2018
Jereo ireo fampiharana Android izay nahazo ny mari-pahaizana Material Design 2018 sy ny antony.
Ny Halloween !!
Fifanarahana amin'ny fampiharana sy lalao tsara indrindra izay hahafahanao mankafy amin'ity alin'ny Halloween ity hankafizanao irery na miaraka amin'ny orinasa.
Raiso maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ny iPhone XS MAX Launcher
Ahoana ny fampiasana WhatsApp Web avy amin'ny solosaina
Fampianarana tsotra izay hanazavana ny fomba fampiasana WhatsApp Web avy amin'ny solosaina amin'ny fomba mora, haingana ary azo ampiharina.
Project Atlas, sehatra cloud an'ny EA ho an'ny filalaovana finday
EA dia miasa amin'ny Project Atlas, sehatra filalaovana streaming izay hahafahantsika mampiasa lalao AAA telo amin'ny fitaovana tsy misy loharano be loatra.
Ahoana ny fomba hampiasana ny lohahevitra maizina an'ny Google Maps: inona no vaovao ao amin'ny app maps
Google Maps dia nohavaozina mba hahafahanao mamelona ny lohahevitra maizina ho an'ny fitetezana. Amin'izany fomba izany no ahafahanao manana izany fomba lamaody izany.
Fampiharana kintana 5 ho an'ny famokarana !!
Ahoana ny fomba hizarana sary amin'ny hafatra manokana amin'ny Instagram
Jereo ny fomba fizarana sary amin'ny Instagram amin'ny alàlan'ny hafatra manokana. Afaka mizara boky aman-gazety amin'ny olona ifandraisanao ianao.
Ahoana ny fomba hamafana ireo mpanaraka amin'ny kaontinao Instagram
Jereo ireo dingana arahinao mba hanesorana ireo mpanaraka anao amin'ny Instagram. Nanazava tsikelikely tao amin'ilay fangatahana.
Ahoana ny fomba fanakanana ny cookies sy ny hafatra miafina amin'ny Opera Browser
Raha reraky ny cookies sy ny hafatra momba ny fiainanao manokana ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba ahafahantsika misoroka azy ireo noho ny fiasa vaovao ao amin'ny tranokala Opera
[APK] Ahoana no hananana ny 'Super zoom' an'ny Google Pixel 3 amin'ny Pixel 2
Asehonay aminao ny fomba fananana iray amin'ireo fiasa mahavariana indrindra an'ny Pixel 3 ao amin'ny Pixel 2 anao ary amin'izany maka sary mahatalanjona.
Ahoana ny fandefasana hafatra amin'ny «WhatsApp»
Ahoana ny fahitana ny kinova fampiharana napetrakao amin'ny Android
Jereo ny fomba hahafantarana tsara hoe inona ny kinova fampiharana napetrakao amin'ny telefaona Android anao. Nanazava tsikelikely.
Ity no fanampiana tsara indrindra amin'ny sari-tany Red Dead Redemption 2
Asehonay anao ny fanampiana tsara indrindra amin'ny sari-tany Red Dead Redemption 2: ahoana ny fananana ny sarintany lalao amin'ny findainao mba tsy hahavery anao intsony.
Ahoana ny fomba hivoahana amin'ny Facebook Messenger amin'ny Android
Ahoana ny fomba hivoahana amin'ny Facebook Messenger. Jereo ireo dingana hivoahana amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra amin'ny Android.
Ahoana ny fomba fampidinana sary, horonan-tsary na tantara amin'ny Instagram
Jereo ny fomba fampiasana ireo rindranasa ireo ao amin'ny Instagram hampidinana sary, horonan-tsary na tantara amin'ny findainao Android amin'ny fomba tsotra.
Mpilalao mozika tsy misy doka tsara indrindra ao amin'ny Play Store
Fisafidianana mpilalao tsara indrindra ho an'ny Android raha tsy misy dokam-barotra. Sintomy ny iray amin'izy ireo ary hiaina an'izao tontolo izao amin'ny mozika.
Ny fampiharana fifehezana ny ray aman-dreny tsara indrindra ho an'ny Android
Jereo ireto rindranasa ireto izay hanampy anao hifehezana ny zavatra ataon'ny zanakao amin'ny telefaona Android amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba tsotra.
Ahoana ny fomba hanampiana kaonty Google Chrome vaovao ho an'ny Android
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny dingana rehetra hanarahana anao hahafahanao manampy kaonty vaovao amin'ny Google Chrome hanoratana ny fikarohana sy ny tantarantsika.
Ny fampiharana tsara indrindra hoverboard amin'ny Bluetooth
Ny fampiharana dimy tsara indrindra hoverboard amin'ny Bluetooth. Jereo ireo rindranasa ireo ahafahanao mifehy ny hoverboard-nao amin'ny fomba tsotra.
Play Pass, ity no ho famandrihana aloa ho an'ny Google Play
Miasa ao amin'ny Play Pass ny Internet goavambe iray, famandrihana isam-bolana ao amin'ny magazay fampidirana azy hiditra amin'ireo rindrambaiko voaloa avy amin'ny Google Play.
Ahoana ny fomba hamoronana hitsin-dalana na hitsin-dàlana amin'ny zavatra rehetra amin'ny Android miaraka amin'i Shorty
Fampianarana tsotra izay hanazavana ny fomba famoronana hitsin-dàlana amin'ny zava-drehetra amin'ny findainao Android.
Akademia hahombiazan'ny fampiharana: Google dia hampiofana ny mpamorona fampiharana Android maimaim-poana
Google dia manampy ny mpandrindra hampakatra ny fampiharana Android. Jereo ity lalam-piasana ity hampakatra fampiharana ao amin'ny Google Play.
Ahoana ny fivoahana amin'ny Google Chrome ho an'ny Android
Raha reraky ny fahalalana an'i Google amin'ny pejy web tsidihanao rehetra ianao, ny safidy tsara indrindra hialana amin'izany dia amin'ny fivoahana amin'ny Google Chrome.
[APK] Fampiharana ambony hijery TV maimaim-poana miaraka amin'ny mifanentana amin'ny Chromecast
Ahoana ny fomba hamafana ny tantaranao amin'ny Google Chrome ho an'ny Android
Raha te hamafa ny tantaran'ny browser Chrome anao ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba anaovany azy tsikelikely.
Ahoana ny fomba hampiasana ny WhatsApp handany angon-drakitra finday kely kokoa
Jereo ireto fika tsotra ireto hampihenana ny fanjifana angona WhatsApp amin'ny findainao Android. Mitombina ho an'ny kinova Android rehetra.
Ahoana ny fampiasana ny endri-tsarimihetsika vaovao amin'ny GBoard
Jereo hoe ahoana no ahafahantsika mampiasa ny fiasa fisoratana vaovao izay efa nampidirina tao amin'ny app GBoard amin'ny Android.
Ahoana ny fampiasana ny sticker sticker WhatsApp vaovao
Sticker for WhatsApp no ​​lasa fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza indrindra amin'ny rehetra. Mianara mampiasa azy ireo amin'ny telefaona Android.
Google Maps dia maniry anao tsy hahavery antsipirihany ireo toerana tianao indrindra
Ny goavambe amin'ny Internet dia manomana fanavaozana ny Google Maps izay hahafahanao manaraka ireo toerana tianao indrindra mba tsy hahadino anao ny zava-baovao.
Ahoana ny fomba hanonona hafatra iray avy amina fifandraisana amin'ny WhatsApp miaraka amin'ny fihetsika
Nohavaozina ny WhatsApp omaly tamin'ny kinova miorina mba hahafahanao mampiasa fihetsika hanonona hafatra ary hamaly haingana.
Ilay mpandefa Android tsara indrindra !!, ilay solon'anarana tena izy amin'ilay Nova Launcher
Google dia manamafy fa hanavao ireo sarimihetsika amin'ny endrika 4k maimaim-poana
Google dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ny sarimihetsika rehetra novidiana hatramin'ny omaly amin'ny kalitao SD sy HD dia havaozina mivantana ary maimaimpoana amin'ny endrika 4k
Ahoana ny fomba hampiasana ny fanoratana am-peo ivelan'ny fiteny amin'ny GBoard
Ahoana ny fananana fanoratana am-peo ivelan'ny Internet amin'ny GBoard. Fantaro misimisy kokoa momba ity endri-javatra vaovao ity amin'ny Google keyboard amin'ny Android.
Files Go by Google dia hanampy mpilalao media amin'ny fanavaozana manaraka
Herintaona lasa izay dia nanangana rindranasa vaovao tao amin'ny Play Store ilay goavambe fikarohana, ...
Ny fanavaozana ny Facebook vaovao dia mamela ny manampy hira amin'ny sary sy horonan-tsary
Ny Facebook dia hamela manampy hira amin'ny sary sy horonan-tsary. Fantaro bebe kokoa momba ity fisehoan-javatra vaovao ity izay ho avy tsy ho ela amin'ny tambajotra sosialy.
Ny kinova Google Play manaraka dia hahafahantsika miato famandrihana
Ny fanavaozana manaraka ny Google Play Store dia hahafahantsika miato vetivety ny famandrihana izay aloanay matetika amin'ny alàlan'ny fivarotana app Google.
Ahoana ny fomba hampiasana ny maody amin'ny alina ao amin'ny Samsung Internet Browser
Raha mampiasa ny navigateur noforonin'i Samsung matetika ianao dia tokony ho fantatrao ny fiasa mamela anao hampihetsika ny maody alina, fa amin'ity lahatsoratra ity kosa no hanazavana azy aminao.
Ahoana ny fomba fandaharana WhatsApp handefasana hafatra mandeha ho azy. (Tutorial video tsikelikely)
Ahoana ny fomba hampiasana ny fitahirizana angona amin'ny Facebook
Ahoana ny fomba hampiasana ny fitahirizana angona ao amin'ny app Facebook. Jereo ity fika ity mba hahafahanao mitahiry ny fanjifana angona finday amin'ny fampiharana.
Ireo vahaolana dimy tsara indrindra amin'ny Google Inbox for Android. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fampiharana hafa amin'ny Inbox. Azo alaina izao.
Manavao ny Firefox ary manampy ny asan'ny horonantsary mitsingevana
Ny fampiasa Sary amin'ny Sary hita ao amin'ny Android Orro dia tohanan'ny mpitety tranonkala Mozilla Firefox.
Netflix HDR dia tonga amin'ny telefaona Android vaovao
Finday Android vaovao mifanaraka amin'ny Netflix HDR. Fantaro bebe kokoa momba ireo telefaona vaovao izay voamarina ofisialy.
Ahoana ny fanesorana ny nomeraon-telefaoninao amin'ny fampiharana Facebook. Jereo ireo dingana hamafana ny nomeraon-telefaoninay ao amin'ilay fampiharana.
Ahoana ny fomba ahazoana kitendry mitsinkafona GBoard amin'ny telefaona Android anao
Ahoana ny fampiasana GBoard mitsingevana keyboard amin'ny Android. Fantaro ny fomba ahazoana ilay fizarana fitendry vaovao amin'ny findainao Android.
Tsy ho ela ianao dia ho afaka hanadino ny fanindriana feon-tsoratra iray isaky ny iray hafa hilalaovana azy ireo amin'ny WhatsApp. Fahatongavana iray manontolo.
Snapchat dia nohavaozina miaraka amin'ny sivana vaovao ho an'ny saka izay hahafahanao manome fifandraisana mahafinaritra kokoa amin'ny sarinao amin'ity tambajotram-pifandraisana ara-tsosialy ity.
Ahoana ny famoahana mailaka ao amin'ny Gmail for Android. Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahantsika manafoana ireo fandefasana ireo.
Ahoana no hanamarinana ny kaontinao Instagram
Ahoana ny fanamarinana ny kaontinao ao amin'ny Instagram sy ny fepetra takiana tokony ho feno. Tadiavo ireo dingana hanamarinana ny kaontinao amin'ny tambajotra sosialy.
Fangatahana hijery sarimihetsika mahatsiravina maimaimpoana amin'ny Halloween
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika mahatsiravina maimaimpoana amin'ny Halloween. Jereo ireto rindranasa Android ireto hahitanao ny sarimihetsika tsara indrindra amin'ny Halloween.
Fetsy hahazoana bebe kokoa amin'ny Google Maps
Mialà bebe kokoa amin'ny Google Maps miaraka amin'ireo tetika ireo. Fantaro misimisy kokoa momba ireo tetika ireo hahazoana bebe kokoa amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hamafana ny tantaran'ny fikarohana ao amin'ny Instagram
Ahoana ny fomba hamafana ny tantaran'ny fikarohana Instagram amin'ny Android. Jereo ireo dingana hanadio ity tantaram-pikarohana ity amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hanananao sary an-tsary hafa isan'andro amin'ny Android
Ovay isan'andro ity rindrambaiko Android anao amin'ny fampiharana ity. Fantaro bebe kokoa momba ity fampiharana ity izay ahafahanao manova ny valiha.
Ahoana ny fomba famindrana resaka WhatsApp amin'ny telefaona Android iray mankany amin'ny iray hafa
Ahoana ny famindrana ny resaka WhatsApp amin'ny telefaona hafa. Jereo ny dingana tsy maintsy raisinao hialana amin'ireo resaka ireo.
Araraoty tsara ny Waze miaraka amin'ireto torohevitra ireto
Tetika telo hahazoana bebe kokoa amin'ny Waze amin'ny Android. Jereo ireto fika tsotra ireto hampiasa ny fampiharana Android amin'ny fomba mahomby kokoa.
Ireo ny fampiharana Google ho an'ny Android izay andoavan'ny mpanamboatra
Ireo mpanamboatra dia tsy maintsy mandoa ireo fampiharana Google ho an'ny Android ireo. Fantaro bebe kokoa ny antony tsy maintsy andoavam-bola fangatahana lisansa.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fitahirizana angona ao amin'ny Instagram
Fampianarana tsotra izay hanazavana ny fomba hampiasana ny fitahirizana angona ao amin'ny Instagram, tsikelikely, rehefa mandeha tsy misy Wi-Fi isika.
Google Maps dia manohy manome lanja ireo fiasa vaovao toy ny fizarana ny lisitry ny tianao na ny fahafantarana hoe aiza no hanomezana vola ny fiara elektrika. Misy vaovao vaovao 3 mahafinaritra be.
Ahoana ny fomba hisorohana ny horonan-tsary tsy hilalao ho azy ao amin'ny Twitter. Jereo hoe ahoana no ahafahana mampandeha ity fampiasa ity amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba famoronana sary 3D miaraka amin'ny endrika Facebook vaovao
Ahoana ny fomba hamoronana sary 3D amin'ny Facebook. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao izay efa tonga tao amin'ny tambajotra sosialy ary ho avy tsy ho ela amin'ny Android.
Google Play izao dia mamela anao hizaha ny famoahana ho avy sy ny lalao karama
Google Play dia mamela anao hanandrana lalao karama. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao atolotra ao amin'ny fivarotana app.
Ahoana ny fomba hampiasana na hanafoanana ny toe-javatra amin'ny Instagram
Alefaso izay hanazavana ny fomba hampiasana na hanafoanana ny toeran'ny hetsika ao amin'ny Instagram.
Ahoana ny fomba hampiasana ny blocker doka Google Chrome amin'ny Android
Ahoana ny fomba hampiasana ny blocker doka amin'ny Google Chrome. Jereo ireo dingana hampiasana ity mpanakana doka ity amin'ny browser.
Ahoana ny fomba hahatsiarovana amin'ny fotoana rehetra nijanonantsika tamin'ny Google Maps
Misaotra an'i Google Maps, afaka fantatsika amin'ny fotoana rehetra nijanonantsika ny fiara tamin'ny fotoana fohy sy haingana.
[APK] Sintomy ny kinova Google Keep vaovao miaraka amina endrika Android Pie nohavaozina tanteraka
Ny lahasa farany nampidirin'i Google Maps dia ahafahantsika mikaroka tobim-piantsonana mpamily herinaratra.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fitahirizana angona ao amin'ny Facebook Messenger. Jereo ny dingana hampiasana ity asa ity amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra.
Miverina izahay miaraka amina fampianarana video tena tsotra sy tsotra izay hanehoako aminao ny fomba fampiasana ny fampiasa vaovao an'ny Facebook 360º Photos, fampianarana video vaovao izay anehoako anao tsikelikely ny fomba fampiasana ireo fampiasa vaovao mamela antsika maka sary 360º ao amin'ny Facebook.
Sintomy izao ny YouTube Beta: andramo ny vaovao alohan'ny olon-kafa
Nampandrenesina androany ny YouTube Beta hahafahantsika maka ny kinova beta voalohany amin'ny sehatra video par excellence.
Ahoana ny fomba hanokafana ny PC Windows anao amin'ny sensor amin'ny dian-tànan'ny findainao Android
Amin'ny alàlan'ny fampiharana Remote Fingerprint Unlock dia afaka mamoha ny Windows PC sy ny sensor sensor izay ananantsika amin'ny finday Android isika.
Ahoana ny fomba handrindrana an'i Blokada, ny blocker, fampiharana ary lalao tsara indrindra amin'ny tranonkala
Ahoana ny fikirakirana fampandrenesana ao amin'ny WhatsApp
Ahoana ny fikirakirana ny fampandrenesana WhatsApp amin'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ny fomba ahafahantsika manamboatra ireo fampandrenesana ireo.
Ahoana ny fahafantarana ireo fampiharana sy lalao rehetra novidinao tao amin'ny Google Play Store
Ny Fividianana Fividianana dia fampiharana izay ahafahanao mahafantatra izay fampiharana sy lalao novidinao. Fampiharana maimaim-poana izay milaza aminao ny vola lany rehetra aza.
Ahoana ny fomba hamoronana vondrona amin'ny WhatsApp. (Amboary ary alamino izany)
Alefaso izay anomezanay anao tsikelikely ny fomba famoronana vondrona ao amin'ny WhatsApp, amboary ary amboary izany mba hifandraisana amin'ireo olona maro miaraka.
Ahoana ny fanovana ny pejy fandraisana an'ny Google Chrome amin'ny Android
Ahoana ny fanovana ny pejy fandraisana ao amin'ny Google Chrome. Jereo ny fomba tsotra ahafahanao manova ny pejy fandraisam-bahiny amin'ny navigateur.
Ny kinova Poco Launcher dia azo alaina ao amin'ny Google Play
Azo alaina izao ny kinova POCO Launcher. Fantaro bebe kokoa momba ity launcher Pocophone F1 ity izay efa misy ao amin'ny Play Store.
Ahoana ny fanondranana ny lisitry ny lisitry ny Spotify
Ahoana ny fanondranana ny lisitry ny lisitry ny Spotify. Jereo ny fitaovana tsara indrindra hanondranana ireo lisitra ireo amin'ny sehatra streaming.
Ahoana ny fandefasana mailaka miafina amin'ny Gmail amin'ny Android
Ahoana ny fampiasana mailaka tsiambaratelo ao amin'ny Gmail. Fantaro ny fomba fampiasana an'io fiasa io amin'ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hamafana ny rakipeo ao amin'ny Google Assistant
Ahoana ny fomba hamafana ny baiko avy amin'ny tahiry ao amin'ny Google Assistant. Fantaro bebe kokoa momba ny fomba hamafana ireo firaketana ireo.
Araka ny kaody amin'ny fampiharana Google Play Film, dia toa manondro ny zava-drehetra fa hamela antsika hanavao ny sarimihetsika HD ho 4k maimaim-poana ilay mpikaroka
Ahoana ny fomba hampiasana ny fandikan-teny mandeha ho azy ao amin'ny Google Chrome. Jereo ny dingana hampiasana ity asa ity amin'ny browser for Android.
Inona no atao hoe APK ary ahoana ny fampidinana azy amin'ny findainay Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo karazana rakitra ireo sy ny fomba fampidinana azy ireo.
Ahoana ny fanamarihana resaka amin'ny WhatsApp raha vakiana
Ahoana ny fanamarihana ny resaka raha vakiana amin'ny WhatsApp. Tadiavo ny fomba tsotra hamelana ity fampandrenesana ity ho esorina raha mbola tsy namaky hafatra izahay.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fitahirizana angona ao amin'ny Twitter
Ahoana ny fomba hampiasana ny fitahirizana angona amin'ny Twitter. Jereo ny dingana hampihenana ny fanjifana ny data amin'ny app Twitter.
Fampiharana Android tsara indrindra hikarohana fampahalalana
Fampiharana Android 4 hikarohana fampahalalana. Zahao ireo rindranasa ireo ahafahanao mitady fampahalalana mora foana.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fomba fijerin'ny birao ao amin'ny Chrome sy Firefox ho an'ny Android
Ny fomba fijerin'ny birao atolotry ny mpanamory finday avo lenta dia ahafahantsika mitsidika ny tranonkala toy ny hoe manao azy amin'ny solosaina isika.
Inona ny fotoana fiverenana ao amin'ny Google Play?
Ny fotoana fiverenana rehetra ao amin'ny Google Play. Jereo ny fe-potoana farany ahafahanao mahazo famerenam-bola ao amin'ny Google Play.
Ahoana ny fomba handefasana atiny Netflix sy Spotify miaraka amin'ny Google Assistant amin'ny Chromecast ao amin'ny Google Home vaovao
Ampiasao ny baiko amin'ny feo: "Milalaova zavatra hafahafa ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny" handefasana atiny ho an'ny Netflix sy Spoti any amin'ny Chromecast miaraka amin'ny Google Assistant.
Ahoana ny fomba ahazoana vola amin'ny Google Play
Ahoana ny fomba ahazoanao vola amin'ny Google Play. Fantaro ny fomba hahazoana fihenam-bidy aorian'ny fividiananao rindranasa amin'ny magazay.
Ahoana ny fanamarihana ny teny amin'ny sora-matevina, sora-mandry, strikethrough na monospaced ao amin'ny WhatsApp
Fampianarana tsotra izay hanazavana ny fanamarihana ny teny amin'ny sora-matevina, amin'ny sora-mandry, amin'ny strikethrough ary amin'ny monospaced ao amin'ny WhatsApp.
Apetraho amin'ny Android ny mpandefa Pocophone maimaim-poana tsy misy APK
Efa ananantsika ny mpandefa Pocophone ao amin'ny Google Play Store maimaim-poana ary tsy mila APK, ka ny smartphone dia toa "Poco"
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho Pixel 3
Seranan-tsambo iray namboarin'ny mpamorona ao amin'ny XDA Forums dia ahafahanao manana Animoji mahafinaritra an'i Xiaomi amin'ny Android 5.0 na telefaona avo kokoa.
[APK] MegaDeDe, asehonay aminao ny fomba hahazoana ilay alternative tena izy amin'ny PlusDeDe
[APK] Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana ny pikantsary fakantsary Pixel 3 amin'ny Pixel na Pixel 2 anao
Azo jerena izao ny apk ny pikantsary fakantsary Pixel 3. Fampiharana izay havaozina, na dia hampiasa ny vaovao tsara indrindra dia mila ny Pixel 3 ianao.
Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny Nova Launcher amin'ny Huawei, Samsung, sns, sns ...
Androany aho te hiezaka hamaha olana iray lazain'ny mpampiasa Nova Launcher amiko ary izaho manokana dia ...
Raha manana Pixel 3 ianao ary monina any Etazonia dia hamaly antso ho anao ny mpanampy Google
Ny Pixel 3 sy Pixel 3 XL dia misy miaraka amina endri-javatra mahavariana: valio ireo antso an-tariby ho anao miaraka amin'ny Google Assistant.
[APK] Ahoana ny fomba fampidinana ny Pixel Launcher miaraka amin'i Google Assistant amin'ny Google Pixel 3 [Video]
Google Assistant dia tafiditra tanteraka ao amin'ny widget fikarohana Google an'ny kinova vaovao an'ny Pixel Launcher amin'ny Pixel 3.
Google Photos Live Albums dia hampakatra ny sary tsara indrindra ao amin'ny Home Hub
Raha manana Google Home Hub ianao, dia azonao atao ny mampiasa ny endri-javatra Live Album vaovao an'ny Google Photos natolotry ny G. lehibe.
[APK] Sintomy ary apetraho ny POCO Launcher amin'ny Android 5.0 na avo kokoa
Fampiharana Android tsara indrindra ho an'ny orinasa
Ny fampiharana Android dimy tsara indrindra ho an'ny orinasa. Jereo ireto rindranasa dimy ireto izay tokony ampidinin'ny raharaham-barotra faran'izay haingana.
Ahoana ny fanovana ny efijery hidin-tariby Android anao
Ahoana ny fomba hitehirizana ny angon-drakitra amin'ny zotram-pizahantsika amin'ny Google Chrome
Noho ny fiasa fitehirizana angona natolotry ny Google Chrome antsika dia afaka mampihena ny angon-drakitra marobe isam-bolana avy amin'ny salanisa izahay.
Ahoana ny fomba hamoronana kara-panondro Instagram: inona no vaovao amin'ny tambajotra sosialy hanamorana ny fanarahanao
Azonao atao ny manamboatra ny kara-panondronao Instagram mba hahafahan'ny tsirairay mi-scan azy io ary mankany amin'ny mombamomba anao. Makà mpanara-dia haingana.
Ahoana ny fomba hampijanonana ny Instagram tsy hilaza amin'ny Facebook hoe aiza ianao
Ahoana ny fomba hampijanonana ny Instagram tsy hilaza amin'ny Facebook hoe aiza ianao. Fantaro misimisy kokoa momba ny fomba hanajanonana ny fampiasa izay tsy ho ela.
Torohevitra hividianana rindranasa amin'ny Android (fa tsy ho faty raha manandrana)
Torohevitra hividianana rindranasa Android. Jereo ireto torohevitra ireto raha hividy fampiharana ao amin'ny Play Store ho an'ny telefaoninay.
Google Chrome dia hijanona tsy ho ela amin'ny Android taloha
Google Chrome dia tsy hiasa amin'ny kinova Android taloha. Hijery misimisy kokoa momba ny fiafaran'ny fanohanan'ny mpitety tranonkala amin'ireo kinova ireo.
Lalao sy fampiharana Android hankalazana ny Halloween
Lalao sy fampiharana Android 5 hankalazana ny Halloween. Jereo ireto lalao sy fampiharana mampihorohoro ireto ho an'ny telefaona Android efa misy.
[APK] Ahoana ny fomba hampiasana ny lohahevitra maizina ao amin'ny Google News, ny fampiharana vaovao an'ny G lehibe
Ampianarinay ianao hampavitrika ilay lohahevitra maizina ao amin'ny kinova 5.5 an'ny Google News, ilay fampiharana vaovao vaovao G lehibe misy any amin'ny firenena sasany.
Ofisialy io: hampiditra doka amin'ny WhatsApp ny WhatsApp
Voamarina: hampiditra doka amin'ny fampiharana amin'ny WhatsApp ny WhatsApp amin'ny 2019. Fantaro bebe kokoa ny fahatongavan'ny doka amin'ny fampiharana amin'ny 2019.
Ahoana no hahalalana hoe iza no hiresahanao matetika amin'ny WhatsApp
Ahoana no hahafantaranao hoe iza no mifandray aminao miresaka betsaka amin'ny WhatsApp. Jereo ireto dingana tsotra ireto hahitanao hoe iza no tena miresaka betsaka ao amin'ilay app ianao.
Fomba fampiasana ny fakantsarinao Android miaraka amin'ny fàfana ho fakan-tsary miafina
[APK] Yahoo Together no fampiharana chat vondrona tonga lafatra ho an'ny fianakaviana sy ny namana
Yahoo Together dia fampiharana chat group izay miavaka amin'ny rindrambaiko noforonina tsara, tranombokin'ny vondrona ary ny fahaizana mitady zavatra miaraka.
Fampandehanana hafatra sy haino aman-jery sosialy maivana indrindra eto amin'ny Play Store
Alefaso ny fanangonana ny fampiharana maivana indrindra ho an'ny fandefasan-kafatra eo noho eo sy ny tambajotra sosialy avy amin'ny Google Play Store.
Ahoana ny fomba hampiasana ny maody amin'ny alina ao amin'ny Twitter
Ny maody amin'ny alina, antsoina koa hoe maizina, dia fiasa iray ahafahantsika manamaizina ny fiafaran'ny fampiharana mba hisorohana ny masontsika tsy ho reraka amin'ny tontolo maivana.
Raha te hanana traikefa mitambatra ianao eo amin'ny PC sy ny findainao, miaraka amin'ny Microsoft Launcher, amin'ny andiany 5, dia ho mora kokoa ny zava-drehetra.
Ny fanavaozana farany ny fizahana Firefox Focus dia manampy fanatsarana hatsarana vaovao sy motera fandikana vaovao handefasana pejy haingana kokoa.
Hatramin'ny kinova beta farany dia efa azonao atao ny milalao horonantsary YouTube amin'ny WhatsApp miaraka amin'ny maody fikandrana mamela anao hanohy hiresaka.
Ahoana ny fomba fandraisam-peo amin'ny Google Fit. Jereo ny dingana tokony hatao amin'ny Android sy Wear OS amin'ny alàlan'ny fampiharana Google.
[APK] Sintomy ny ES File Explorer kinova 3.2.5, ny tsara dia ilay tsy misy bloatware
Ahoana ny fomba fampidirana mozika amin'ny mozika Google Play
Ahoana no ahafahantsika mampakatra mozika amin'ny Google Play Music. Jereo ireo dingana handefasana mozika amin'ny sehatry ny mozika Google.
SuperSU dia nesorina tao amin'ny Play Store
Nanjavona tao amin'ny Google Play Store i SuperSu. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanesorana ity app root ity amin'ny app store.
Citymapper, ny fampiharana fitaterana tena ilaina ho an'ireo monina ao an-tanàna
Ho an'ireo izay monina amin'ny tanàna toa an'i Madrid na i Barcelona Citymapper dia fampiharana iray ilaina mba hivezivezy sy hanitsiana ny ora hahatongavan'izy ireo.
Ahoana ny fomba hanampiana ny fidirana mivantana amin'ireo làlana izay ataontsika isan'andro ao amin'ny Google Maps
Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manampy zotra iray avy amin'ny Google Maps mankany amin'ny birao ary avy eo mandefa azy mivantana, mamonjy fotoana amin'ny fanamboarana azy.